Mayelana NATHI - Huizhou Olink Technology Co., Ltd.
Mayelana ne- & Olink Technology Co, Ltd.
Kusukela ngo-2001, u-Olink uzimisele ngokukhiqiza izintambo zokubopha izintambo zamasiko, izingqungquthela zekhebula, ikhebula le-USB, izixhumi zomsindo wemoto, isokhethi, isicwecwe namatheminali. Khonamanjalo, sihlinzeka nge-OEM, insiza ye-ODM ekwakhiweni kwemikhiqizo / isigaba se-APQP kuzimfuno zamakhasimende.
Udwendwe lwethu lwangaphakathi kwendlu lubandakanya ukubumba nokusetshenziswa kwamathuluzi, i-extrusion yocingo nekhebula, isixhumi nomhlangano wesokhethi, ukugxivizwa kwensimbi ngokunemba, amahanisi wezintambo nomhlangano wekhebula. Sinikeza uhla olugcwele lwezixhumi zezimoto nezisekelo zazo zonke izinhlobo zezimoto ezithengisa kakhulu.
Imikhiqizo ka-Olink isetshenziswa kabanzi kumadivayisi we-elekthronikhi yezimoto njengohlelo lwezokuphepha, uhlelo lwe-AV, uhlelo lweMultimedia njll. i-elekthronikhi nokukhanyisa kwe-LED. Izinto ezisetshenzisiwe zihambisana ne-ROSH / Reach / CA65 futhi nge-UL / CUL, VDE, CCC. Izintambo ezenzakalelayo nezintambo ngokuya ngamazinga we-SAE / JASO / DIN. Sizothola i-IATF16949 yakamuva ngoMeyi 2018.
Sithumela eYurophu, eMid-mpumalanga, eMelika, e-Australia naseJapane emakethe. Amakhasimende ethu aziwayo afaka i-3M, Yamaha, Honeywell, Valeo, VDO neVisteon.
Ifektri yethu itholakala eHuizhou City, esifundazweni saseGuangdong, kushayela ihora elilodwa nje ukuya eShenzhen. Ngendawo yokusebenzela eyi-17,000 square metres, sinabalingani abalinganiselwa ku-700.
Qalisa nge-ERP nohlelo lwe-CRM, Sihlala sinamathela ebuhleni BOKUTHEMBEKA UMHLAHLANDLELA, DALA UKUBALULEKA OKWENGEZIWE KWEKHASIMENDE KANYE UKHULA NGEKHASIMENDE
Sizibophezele ukuba ngumhlinzeki oqeqeshiwe we-ODM womhlaba wonke we-wire harness ne-cable assembly, sidlulise isitifiketi se-IATF 16949: uhlelo lwekhwalithi le-2016 ne-ISO14001: Uhlelo lwe-2015 lwezemvelo, kanye nesitifiketi sohlelo lwezokwelapha lwe-ISO13485.
Imikhiqizo yethu iyahambisana ne-RoHS, REACH kanye ne-non-phthalate standard protection standard, yonke impahla eluhlaza ivunyelwe i-UL.
QC / Ukusekelwa Kwezobuchwepheshe
Abasebenzi bomnyango wethu wokukhiqiza banesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-5 ekukhiqizeni izintambo zokubopha. I-QC inabasebenzi abangu-18 sebebonke. Ngemuva kokukhethwa okuqinile, ukuhlolwa kwe-wire harness kuneminyaka engaphezu kwengu-8 yesipiliyoni. Umnyango wethu wezobunjiniyela uthole izitifiketi eziningi zobuchwepheshe kanye nesipiliyoni seminyaka engu-15 sokucwaninga nokuthuthukiswa kwemikhiqizo yokubopha izintambo.
Sinikeza insizakalo engu-7 * 24H ukunikeza ikhotheshini yethu yamakhasimende kungakapheli usuku olulodwa, sinikeze amasampula kungakapheli izinsuku ezintathu, i-oda lingalethwa kungakapheli izinsuku eziyi-7 kungekudala, amandla ethu okukhiqiza nsuku zonke angafika kuma-500, 000 ama-PC.
Imikhiqizo yethu ijabulela imakethe e-United States, eYurophu, e-Australia, eCanada nase-Aisa.
Sizimisele ukwamukela ukuvakasha kwakho, i-Huizhou Olink Technology Co., Ltd. uzoba umlingani wakho onokwethenjelwa!